" नेपाली चलचित्र - ग्ल्यामर्सको ब्यापार छैन अपार " – An Online Entertainment News Portal
HomeArticle” नेपाली चलचित्र – ग्ल्यामर्सको ब्यापार छैन अपार “
– लक्ष्मण सिटौला ( सहित्यकार )
केटीले ब्रा र पेन्टी देखाएर फोटो सुट गरिन भने यसलाई ग्ल्यामर्स भनिन्छ । अन्डरबेर र गन्जी लगाएर यदि केटाले फोटो सुट गर्यो भने बहुला भन्छन । अर्थात यस्को कुनै तुक रहदैन । र केटाले यसरी फोटो पनि खिचाउदैनन । लाज हुन्छ भन्छन । समाजले के भन्ला भन्छन । समाज एउटा डरको घर पनि हो । समाज छ भने त्यहा नियम छ नियन्त्रण छ र नियमन पनि छ । समाज ब्यक्ति ब्यक्तिको सम्पुजन पनि हो ।
रक्सीको बिज्ञापनमा किन महिलाको फोटो राख्नुपर्ने ?
पुरुष जति रक्स्या हुन्छन स्त्री पनि त्यतिकै रक्स्या हुने हो भने
सम्भवत यो समाज यति भयग्रस्त भैसकेको हुने थियो कि हामी कल्पना पनि गर्न सक्तैनौ । चलचित्र मानिसलाइ स्वस्थ मनोरंजन दिनाका लागि निर्माण हुनुपर्छ नकि यौन उत्तेजना फैलाउने द्वैद अर्थ बोक्ने सम्बाद र दोहोरो चरित्र बोक्ने हाउभाउ । मानिसले नीलो चलचित्र पनि निर्माण गरिरहेकै छन । यस्को पनि आ आफ्ना ठाँउमा महत्व होला नै त्यस्को आफ्नै सिमा र सिमितता होला तर बिसुद्द प्रेमकथामा वा सामाजिक बहसमा समाजको जल्दाबल्दा बिषयमा फिल्म निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने बिक्री ब्यापारका नाउँमा किन कथाले मागेको भन्दै हिरोनीलाइ ब्रा र पेन्टीमा नाङ्गो पार्नुहुन्छ ? कि प्रोनो फिल्म नै बनाउनुस कि सुद्द चलचित्र मात्रै बनाउनुस किन एउटामा नै सन्सार जवर्जस्ती घुसाउनु हुन्छपनको ? ।
सस्कृती बाच्यो भने मात्रै देश बाच्ने हो ।मानिस मात्रै बाचेर देश बाच्ने होइन । किन भुटान भुटान जस्तै छ ? किन नेपाल नेपाल जस्तै छ ? किन तिब्बत तिब्बत जस्तै छ ? धनी सस्कृतिले गरीब सस्कृतिलाइ लोप बनाइदिन्छ । जस्तो अग्रेजहरुको भाषा अग्रेजीले आज बिश्वका भाषालाई निरीह बनाइरहेको छ । अग्रेजको अगाडि हामीले अग्रीजीमै कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अग्रीजी भाषाकै कारण बिश्वका कतिपय भाषाहरु लोपोन्मुख अवस्थामा आइसकेका छन । चलचित्रले भाषाको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । साहित्य , चलचित्र ,सङ्गीतबाट पनि भाषाको उन्नति र बिकासका लागि प्रसस्त मात्रामा संभावना रहन्छ ।
हामीले नेपाली चलचित्र निर्माण गर्दा शुद्ध नेपाली भाषालाई पनि
ध्यान दिन सकिरहेका छैनौ । असुद्द र अग्रेजी लवजमा डायलग डेलिभरी गर्न सक्यो भने त्यो हिरो हिरोनी हिट खान्छन । नेपाल अधिराज्यभरी खोलिएका निजि बोर्डिङले नेपाली भाषालाई यसरी सफाय बनाइरहेका छन कि कक्षा कोठामा नै नेपाली बोल्न ब्यान्ड गरिएको छ । स्कुल छिरेदेखी छुट्टी नभएसम्म एउटा नेपाली बिद्यार्थीले नेपाली बोल्न पाउदैन । नेपाली बोल्यो भने फाइन लगाउने चलन छ । हाम्रा बिद्यार्थीहरु अग्रीजीमै खान्छन अग्रीजीमै पढ्छन अग्रेजीमै हिड्छन अग्रीजीमै सपना देख्छन र अग्रेजीमै बिहान उठछन । सुत्त्दा गुडनाइट पापा उठदा गुड मर्निङ मम ब्रेकफास्ट मम । अग्रेजी जान्नु राम्रै हो तर नेपाली भुल्नु चै अपराध हो पाप हो देशद्रोही हुनु हो । सिके रावत आज हरेक बोर्डिङ स्कुलले उत्पादन गरिरहेका छन ।
बिदेशीहरु आदिम सस्कृती खोज्न नेपाल आउछन तर हामी चै हामी सग भएको आफ्नै सस्कृतिलाइ मेटाउने प्रयत्नशील छौ ।
हामीलाई पस्चिमी सस्कृती प्यारो छ र बिस्तारै चलचित्रका माध्यम बाट तिनै सस्क्रुती भित्र्याइरहेछौ । शुद्द नेपाली बिक्तैन यस्लाइ ठिमाहा पार्नुपर्छ अनि बिक्रि हुन्छ । अहिले ढिकीमा चामल कस्ले कुटछ खोइ समय त्यति धेरै । अहिले सेलर होलरमा मिलमा चम्काएको प्लास्टिक मिश्रित चामल बिक्छ । मानिसहरूले प्लास्टिक र बिषादीको बाटो सम्हाउन थालिसकेका छन ।
नेपालमा यौन हिसा जगाउन नेपाली चलचित्र र भारतीय सि ग्रेडमा बनेका चलचित्र पनि त्यतिकै जिम्मेवार छन । नेपालमा यौन हिंसा बढाउन जिम्मेवार स्वयं महिला पनि छन । कथाले माग्यो भने बेड सिन दिन पनि तयार छु भनेर मिडियामा सस्तो अन्तर्वार्ता दिने सस्ता हिरोनीहरुलाइ सोधपुछ गर्नुपर्ने हुन्छ कि
नेपालमा यौन हिंसालाई मलजल गर्न ब्रा र पेन्टीमा उत्रेका नग्न हिरोनीहरु कतिको जिम्मेवार छन भनेर ।
nepali actress glamour